कोरोनाको जोखिम बढेपछि सरकारले पुनः ल्यायो नयाँ नियम, अब व्यवसाय, सवारीसाधन देखि स्कुलहरु खोल्न कडाइ, कुन समयमा खोल्ने बन्द गर्ने ? यस्तो छ सुचना – Dailny NpNews
कोरोनाको जोखिम बढेपछि सरकारले पुनः ल्यायो नयाँ नियम, अब व्यवसाय, सवारीसाधन देखि स्कुलहरु खोल्न कडाइ, कुन समयमा खोल्ने बन्द गर्ने ? यस्तो छ सुचना
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २५, २०७७ समय: २२:४७:२०
काठमाडाैं- सरकारले काेराेना संक्रमणकाे जाेखिम बढेसँगै रात्रिकालीन व्यवसाय र आवागमनमा कडाई गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै बढ्दाे जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन र संक्रमण तथा बेलायतबाट भित्रिएकाे काेराेना भाइरसकाे नयाँ भेरियन्टलाई मध्यनजर गर्दै रात्रिकालीन व्यवसाय र गतिविधिमा कडाई गर्ने निर्णय गरेकाे जानकारी दिएकाे हाे।
जाेखिम बढेका ठूला सहरहरुमा सर्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा वा भिडभाड हुने स्थानमा रहँदा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गराउने मन्त्रालयले जनाएकाे छ।
यस्तै ठूला सहरहरुमा विद्यालय जाने बालबालिकामा पनि संक्रमण बढ्दाे क्रममा रहेकाेले शैक्षिक संस्थाहरुमा उच्चसतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेकाे छ।
यता रात्रिकालीन व्यवसाय तथा रेस्टुरेन्ट राति ९ बजेदेखि कडाइका साथ बन्द गर्न/ गराउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेकाे छ।
विदेशबाट फर्किएपछि घरमै क्वारेन्टाइनमा रहेकोको अनुगमन गर्न स्थानीय प्रशासन र तहलाई समेत निर्देशन दिइएको छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, एन्टीजेन र पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन स्वास्थ्य कार्यालयलाई भनिएको छ ।
सार्वजनिक स्थानमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले रात्रीकालिन व्यवसाय तथा रेष्टुरेन्टहरु राती ९ बजेपछि कडाइका साथ बन्द गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । ठूला सहरमा ५०० र साना सहरमा १०० भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए आवागमनमा कडाइ गराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।
आसन्न तीन दिवसिय क्रिकेट म्याच आयोजनाको स्वीकृति तथा संचालनको सन्दर्भमा विदेशबाट आउने टोली वा भ्रमण दलको सदस्य संख्या वा क्वारेन्टाइन अवधी निर्धारण गर्न पनि भनिएको छ । कोभिडको बढ्दो चुनौतिलाई मध्यनजर गरेर यस्ता कार्यक्रमलाई कडाइ गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
संक्रमणको बढी जोखिम हुने स्थानमा आलोपालोरुपमा एन्टीजेन परीक्षण बढाउन स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले निर्देशन समेत दिएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो समय बेलायती र ब्राजिलियन भेरिएन्ट भेटिएको र संक्रमण फैलिएपछि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायती भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा यसअघि पुष्टि भैसकेको र वृद्धि हुने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङमार्फत सतर्क हुने समेत भनिसकेको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ पछिल्ला दिनहरुमा उकालो लागिरहेको छ ।